2020 iPhones to come with 120Hz ProMotion OLED Screen • TECH CORNER
2020 iPhones to come with 120Hz ProMotion OLED Screen
Android တှထေကျ ပိုကောငျးတဲ့ ‘120Hz ProMotion OLED Display’ ပါဝငျလာမဲ့ iPhone မြား
2019 ခုနှဈဟာ 120Hz refrsh rate Display တှရေဲ့ နှဈတဈနှဈလို့တောငျ ပွောရမလားပဲ။ Android ဖုနျးတျောတျောမြားမြားမှာလဲ 90/120 Hz အစရှိသဖွငျ့ အပွိုငျအဆိုငျတှေ ထှကျပျေါလာနပေါတယျ။ မေးစရာရှိတာက ဂုရုကွီး Apple ရော iPhone တှမှော refresh rate မွငျ့တဲ့ Display တှေ မသုံးသေးဘူးလားလို့ပေါ့။
တကယျက APPLE အနနေဲ့ 2017 ကတညျးက iPad Pro တှမှော 120Hz ProMotion display ကိုအသုံးပွုနခေဲ့တာဖွဈပါတယျ။ ဒီ Pro Motion နညျးပညာကို iPad တှမှော ပဲ ထညျ့သှငျးပေးထားပွီး 2017 ကနေ 2019 ရောကျသညျထိ iPhone Generation နှဈခုစာလောကျမှာ ပုံမှနျ 60Hz display နဲ့သာ အဆုံးသတျခဲ့ရတာ ဖွဈပါတယျ။
ဒါပမေဲ့ အခု သခြောတဲ့ ရပျကှကျက ပေါကျကွားလာတဲ့ သတငျးတဈခုကတော့ iPhone အသဈတှမှော 120Hz ProMotion OLED Panel တှကေို အသုံးပွုတော့မယျလို့ သိရပါတယျ။ Samsung, LG တို့နဲ့ ဆှေးနှေးမှူတှေ စတငျပွုလုပျနပေါပွီတဲ့။ 2017 ကတညျးက ProMotion အသုံးပွုခဲ့တဲ့ iPad တှဟော LCD Panel တှေ ဖွဈပွီး အခု 2020 iPhone တှမှောတော့ 120Hz OLED တှကေို အသုံးပွုမှာပါ။
Android တှထေဲမှာတော့ 120Hz OLED Panel သုံးထားတဲ့ ဖုနျးတှဆေိုရငျ Asus ရဲ့ ROG Phone2လို ဖုနျးတှေ ရှိပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ Apple ရဲ့ ProMotion အသုံးပွု 120Hz OLED Display တှကေတော့ Android ထကျ ပိုကွမျးတော့ မဲ့ အနအေထား မှာ ရှိပါတယျ။
ဆိုတော့ ProMotion နညျးပညာ ဆိုတာ ဘာလဲ?
Apple’s ProMotion Display ဆိုတာ ကိုယျအသုံးပွုနတေဲ့ tasks တှေ အပျေါမူတညျပွီး refresh rate ကို 60 Hz ကနေ 120 Hz အတှငျး သငျ့တျောသလို အသုံးပွုနိုငျအောငျ ပွောငျးလဲ ဖျောပွပေးမှာဖွဈပါတယျ။ Android ဖုနျးတျောတျောမြားမြားမှာ ပါဝငျတဲ့ Refresh တှကေ 60-120, 60-90 အလိုအလြောကျ ပွောငျးလဲ မပေးနိုငျကွပါဘူး။ ကိုယျရှေးခယျြထားတဲ့ Refresh မှာ တဈသတျမတျတညျး ရှိကွတာမလို့ Battery မခံတဲ့ ပွသနာမြိုးတှေ ရှိပါတယျ။
Android တှမှော တဈသတျမှတျထဲ refresh rate ကွီးမွှငျ့ထားတဲ့အခါ Sleep လုပျထားရငျတောငျ Battery တှပေို consume တာမြိုး ရှိတာကွောငျ့ Apple ရဲ့ ProMotion နညျးပညာနဲ့ဆိုရငျ Battery ကို ပိုပွီး အသုံးခံစမှောပါ။
Photo from Ben Geskin
နောကျထပျ Rumours တှကေတော့ 2020 iPhone တှမှော iPhone4ပုံစံ Square Flat Design တှနေဲ့ ထုတျလုပျနိုငျခွေ ရှိတယျဆိုတာပါပဲ။ ပွီးတော့ ပိုပွီး အရှယျအစားသေးတဲ့ Notch design, 3D TOF Camera တှလေဲ ပါဝငျလာနိုငျပါသေးတယျ။
ဆိုတော့ သငျရော iPhone အသဈတှမှော ပါဝငျလာမဲ့ 120Hz OLED Display တှေ အပျေါ စိတျဝငျစားရဲ့လား?
ပွီးတော့ iPhone အသဈဝယျမဲ့သူတှအေနနေဲ့ နညျးပညာ အသဈတှပေါဝငျလာမဲ့ 2020 iPhone တှကေို စောငျ့စခေငျြပါတယျ။
သငျ့မှာ iPhone X တဈလုံးသာရှိမယျဆိုရငျ iPhone 11 series တှကေို မလဲသငျ့သေးကွောငျး ရေးသားထားတဲ့ ဆောငျးပါးကို ဒီနရောကို နှိပျပွီး ဖတျရှူနိူငျပါတယျ။
Android တွေထက် ပိုကောင်းတဲ့ ‘120Hz ProMotion OLED Display’ တွေ ပါဝင်လာမဲ့ iPhone များ
2019 ခုနှစ်ဟာ 120Hz refrsh rate Display တွေရဲ့ နှစ်တစ်နှစ်လို့တောင် ပြောရမလားပဲ။ Android ဖုန်းတော်တော်များများမှာလဲ 90/120 Hz အစရှိသဖြင့် အပြိုင်အဆိုင်တွေ ထွက်ပေါ်လာနေပါတယ်။ မေးစရာရှိတာက ဂုရုကြီး Apple ရော iPhone တွေမှာ refresh rate မြင့်တဲ့ Display တွေ မသုံးသေးဘူးလားလို့ပေါ့။
တကယ်က APPLE အနေနဲ့ 2017 ကတည်းက iPad Pro တွေမှာ 120Hz ProMotion display ကိုအသုံးပြုနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Pro Motion နည်းပညာကို iPad တွေမှာ ပဲ ထည့်သွင်းပေးထားပြီး 2017 ကနေ 2019 ရောက်သည်ထိ iPhone Generation နှစ်ခုစာလောက်မှာ ပုံမှန် 60Hz display နဲ့သာ အဆုံးသတ်ခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ အခု သေချာတဲ့ ရပ်ကွက်က ပေါက်ကြားလာတဲ့ သတင်းတစ်ခုကတော့ iPhone အသစ်တွေမှာ 120Hz ProMotion OLED Panel တွေကို အသုံးပြုတော့မယ်လို့ သိရပါတယ်။ Samsung, LG တို့နဲ့ ဆွေးနွေးမှူတွေ စတင်ပြုလုပ်နေပါပြီတဲ့။ 2017 ကတည်းက ProMotion အသုံးပြုခဲ့တဲ့ iPad တွေဟာ LCD Panel တွေ ဖြစ်ပြီး အခု 2020 iPhone တွေမှာတော့ 120Hz OLED တွေကို အသုံးပြုမှာပါ။
Android တွေထဲမှာတော့ 120Hz OLED Panel သုံးထားတဲ့ ဖုန်းတွေဆိုရင် Asus ရဲ့ ROG Phone2လို ဖုန်းတွေ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Apple ရဲ့ ProMotion အသုံးပြု 120Hz OLED Display တွေကတော့ Android ထက် ပိုကြမ်းတော့ မဲ့ အနေအထား မှာ ရှိပါတယ်။
ဆိုတော့ ProMotion နည်းပညာ ဆိုတာ ဘာလဲ?
Apple’s ProMotion Display ဆိုတာ ကိုယ်အသုံးပြုနေတဲ့ tasks တွေ အပေါ်မူတည်ပြီး refresh rate ကို 60 Hz ကနေ 120 Hz အတွင်း သင့်တော်သလို အသုံးပြုနိုင်အောင် ပြောင်းလဲ ဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Android ဖုန်းတော်တော်များများမှာ ပါဝင်တဲ့ Refresh တွေက 60-120, 60-90 အလိုအလျောက် ပြောင်းလဲ မပေးနိုင်ကြပါဘူး။ ကိုယ်ရွေးချယ်ထားတဲ့ Refresh မှာ တစ်သတ်မတ်တည်း ရှိကြတာမလို့ Battery မခံတဲ့ ပြသနာမျိုးတွေ ရှိပါတယ်။
Android တွေမှာ တစ်သတ်မှတ်ထဲ refresh rate ကြီးမြှင့်ထားတဲ့အခါ Sleep လုပ်ထားရင်တောင် Battery တွေပို consume တာမျိုး ရှိတာကြောင့် Apple ရဲ့ ProMotion နည်းပညာနဲ့ဆိုရင် Battery ကို ပိုပြီး အသုံးခံစေမှာပါ။
နောက်ထပ် Rumours တွေကတော့ 2020 iPhone တွေမှာ iPhone4ပုံစံ Square Flat Design တွေနဲ့ ထုတ်လုပ်နိုင်ခြေ ရှိတယ်ဆိုတာပါပဲ။ ပြီးတော့ ပိုပြီး အရွယ်အစားသေးတဲ့ Notch design, 3D TOF Camera တွေလဲ ပါဝင်လာနိုင်ပါသေးတယ်။
ဆိုတော့ သင်ရော iPhone အသစ်တွေမှာ ပါဝင်လာမဲ့ 120Hz OLED Display တွေ အပေါ် စိတ်ဝင်စားရဲ့လား?
ပြီးတော့ iPhone အသစ်ဝယ်မဲ့သူတွေအနေနဲ့ နည်းပညာ အသစ်တွေပါဝင်လာမဲ့ 2020 iPhone တွေကို စောင့်စေချင်ပါတယ်။
သင့်မှာ iPhone X တစ်လုံးသာရှိမယ်ဆိုရင် iPhone 11 series တွေကို မလဲသင့်သေးကြောင်း ရေးသားထားတဲ့ ဆောင်းပါးကို ဒီနေရာကို နှိပ်ပြီး ဖတ်ရှူနိူင်ပါတယ်။